Xafladii Furitaanka Xarunta Cusub ee Ururka Dhalinyarada KANAVA–Helsinki + Sawiro – SBC
Xafladii Furitaanka Xarunta Cusub ee Ururka Dhalinyarada KANAVA–Helsinki + Sawiro
Posted by editor on Juun 4, 2011 Comments
Waxaa maalinimadii Arbacada ee bisha June 1 deedii si rasmi ah dib u hawlgalay urur weynaha Dhalinyarada Kanava ee Helsinki, oo intii mudo dhowr bilood ah sugayey dayactirka xaruntan cusub ee la furay.
Waxa ay ahayd madal aad u qurux badan oo ay isugu yimaadeen dad aad u tiro badan oo isugu jirey, bulshada Somaliyeed ee degan dalkan Finland, dhalinyaro, masuuliyiin sarsare, siyaasiyiin iyo xildhibaano, iyo saraakiil ka socotay hayadaha caalamiga ah ee wadankan sida IOM ee ayagu qaabilsan arimaha ajaanibta.
Hadaba iyadoo ay halkaasii ka soo jeediyeen masuuliyiintaasi intooda badan khudbado isugu jiray mahadnaq iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay indhahooda ku arkeen sida uu urur weynaha KANAVA u gaaray horumarkii ay ka rajeynayeen masuuliyiintan. Taasoo ay tahay horumar u bahan in la taageero.
Waxay sidoo kale dhamaantood balan qaadeen inay labo jibaari doonaan wada shaqeyntii ka dhaxaysa hayadahooda iyo KANAVA. Waxyaabihii ay sida aadka ula yaabeen ayaa ahaa in barnaamijkaasi gebi ahaanba ay daadihinayeen min bilow illaa dhamaad dhalinyaradii loo abuuray ururkan. Kuwaasoo isugu jiray kuwo ayagu u xuubsiibtay masuuliyada ururkii barbaariyey iyo kuwo kale oo isu diyaarinaya mustaqbalka dhow.
Barnaamijyadii kale ee halkaasi ka baxay ayaa iyagu ahaa kuwo madadaalo iyo fanka ku saabsanaa. Waxaana laga xusi karaa ruwaayad ay halkaasi kusoo bandhigeen dhalinyaro aad u da’yaraa oo jilayey marxaladaha dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed iyo sida ay isu gacan qaban karaan.
Isku soo wada duuboo, waxaa uu kulankaasi gebagabadiisii noqday mid dhamaan dadweynihii ka soo qayb galay ay aad ugu maqsuudeen, loona balamay in loo guntado sidii loo dardar gelin lahaa kobcinta wacyigelinta, akhlaaqda, dhaqanka, aqoonta iyo mas,uuliyada dhalaanka ku barbaaraya wadankan aynu deganahay.
Juun 9, 2011 at 4:47 am
waa arin aad loogu maqsuuda oo farxadleh taas oo ah mid lagu dayankaro waxayna gaareen horemar fiican